निशान न्युज आश्विन ११, 2076
कुनैबेला बामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय थिए फणिराज लोहनी अर्थात् राजु लोहनी । नुवाकोट मदनपुरमा जन्मिएका लोहनी २०६३ सालसम्म तत्कालीन नेकपा एमालेमा निक्कै सक्रिय भएर लागेका थिए । २०४८ मा १० कक्षा पढ्दै गर्दा अनेरास्ववियुमा आवद्ध भएर वाम राजनीतिमा सक्रिय बनेका थिए । तर, २०६३ मा भने उनी राप्रपामा प्रवेश गरे । राप्रपा रहँदा वेरोजगारहरुको मुक्तिका लागि पनि काम गरे । आर्थिक समृद्धिका लागि युवा रोजगार युवा संघ खोलेर युवाका समस्या समाधान गर्न निक्कै सक्रिय बने । र अहिले पनि बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । उनले ‘नेपाल आमा’ नामक पार्टी पनि खोले । उनी त्यसको उपाध्यक्ष बने । पछि २०७० को निर्वाचनपछि उनी सो पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुसहित राप्रपामा समाहित प्रवेश गरे । दुई पार्टी एकतापछि उनी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक संगठन (संयुक्त) को अध्यक्ष छन् । उनी एराप्रपा राष्ट्रवादीको युवक संगठनमा अध्यक्ष थिए । उनी आवद्ध पार्टी राप्रपा संयुक्तले हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, लोहनीसँग यसै विषयमा निशान न्युज डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाई राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक संगठन (संयुक्त) को अध्यक्ष हुनुहुन्छ । काम चाँही के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले हामी पार्टी एकतापछि संगठनको प्रदेश समिति, नगर समिति र वडा समिति निर्माणमा व्यस्त छौं । किनकी पहिले हामीले हाम्रो संगठनलाई चलायमान बनाउनु छ ।
तपाईको पार्टीले हिन्दु जागरण अभियान सञ्चालन गर्दैछ । तपाईहरुको भुमिका के रहन्छ ?
हाम्रो पार्टीले सञ्चालन गर्ने हिन्दु जागरण अभियान सम्पन्न गर्न हाम्रो अति नै महत्वपूण भुमिका रहन्छ । देशभर रहेका युवा जनशक्तिलाई आफ्नो धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्न आफैं जाग्नुपर्छ भनेर सन्देश पनि दिनुछ । अर्काे कुरा पार्टीले सञ्चालन गर्ने अभियान सम्पन्न गर्न जतिसक्दो धेरै युवा शक्ति उतार्नु पनि छ । यस्तो महान कार्यमा युवा शक्तिले पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको संरक्षण र स्वयम्सेवी भुमिका निर्वाग गर्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । त्यसका अलावा उपस्थित भक्तजनहरुलाई रथ दर्शन गर्दा सहज बनाइदिने र रथ यात्रालाई सफल पार्नु हाम्रो दायीत्व हुनेछ ।
तपाईहरु जस्तो युवाहरुले नयाँ नयाँ प्रविधिको विकासतर्फ लाग्नुपर्नेमा किन सनातनी धर्म संरक्षणमा लाग्नुभएको हो नि ?
हेर्नुस्, विकासको साथसाथै आफ्नो धर्म र संस्कारलाई पनि त्यत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । यो एउटा महत्वपूर्ण पनि छ । हामी युवाले विकासको साथसाथै पराम्परागत धर्मलाई पनि बचाउनुपर्छ । यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो । देश विकासका लागि हामीे आफ्नै एजेण्डा पनि तयार पारेका छौं । उदारवादको अर्थनीति अवलम्बन गर्दै नेपालको स्रोत साधन नेपालमै प्रयोग गरी वेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार दिने र विदेशमा रहेका युवालाई फर्काएर देशमै रोजगार दिने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने नीति पार्टीको छ । अर्काे कुरा विकासित मुलुकमा पनि आफ्नो धर्म, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण गरिएको हुन्छ । जुनसुकै देशमा पनि आफ्नो देशको पहिचान सहितको धर्म संस्कृति हुन्छ । वेलायत विकसित देश हो । तर, त्यहाँ पनि आफ्नै संस्कृति र परम्परा छ, जसलाई त्यहाँको सरकारले संरक्षण गरेर बचाएको छ । मुस्लिम बाहुल्यता भएका देशमा इस्लाम धर्मलाई संरक्षण गरिएको हुन्छ । बौद्ध धर्म मान्नेहरुको सवालमा पनि त्यही हो । हाम्रो देशमा ९४ प्रतिशत ओमकार परिवार भएका कारण पनि हामीले हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भनेका हौं । ९४ प्रतिशत आमकार परिवार भएको देशमा धर्म निरपेक्ष हुनस आश्चर्यको कुरा हो । यो नेपालीका लागि लज्जाको विषय पनि हो । त्यही भएर पनि हामीले हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न संघर्ष गर्न जरुरी छ ।
नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनेको छ । तर, तपाईहरुले यसको विरोध गर्दै आउनु भएको छ । के कारणले यो ठिक छैन ? किन विरोध गर्नुभएको हो ?
नेपाल धर्म निरपैष राष्ट्र जनताले बनाएका हैनन् । केही नेताहरुले विदेशी डलरमा बिकेर नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाएको दिनको कुरा दिनको घामझै छर्लंग छ । संविधान बन्नुअघि जनताको राय बुझ्ने नाममा हेलिकप्टर चढ्ने काम भयो । तर, जनताको राय बुझ्ने काम भएन । जे जति राय ल्याइयो, त्यो पोको पारेर राखियो र सीमित जनताले दिएको रायलाई लत्याउँदै जवर्जस्ती लादेर धर्म निरपेक्ष देश बनाइयो । त्यसरी जवर्जस्ती लादिएको धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हामीले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसकारण अब पहिचान सहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ ।
राष्ट्रको आफ्नै धर्म हुँदैन र सबै धर्म समान हुँदा तपाईहरुलाई के फरक पर्छ त ?
हरेक देशले आ–आफ्नो धर्म मानेका छन्, संरक्षण गरेका छन् । तपाईलाई थाहा छ की क्रिश्चियन धर्मको बाहुल्यता भएको ठाउँमा क्रिश्चियन धर्मलाई बढी प्राथमिकता दिइएको हुन्छ । त्यसैगरी मुस्लिम बाहुल्यता भएको देशमा इस्लाम धर्मलाई नै प्राथमिता दिइएको हुन्छ । त्यसकारण प्रत्येश राष्ट्रमा आ–आफ्नै धर्मको पहिचान हुन्छ । जतिसुकै क्रान्तिकारी भए पनि सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । हिजो हिन्दु राष्ट्र हुँदा कुन धर्म मान्नेलाई देश निकाल्ने काम भयो र ? छैन । त्यसकारण पनि अन्य धर्मलाई उत्तिकै सम्मान गर्दै हिन्दु राष्ट्र काय गरिनुपर्छ । त्यो अडानबाट हामी एकरत्ति पनि पछि हट्दैनौ ।
तपाईहरुले धर्म निरपेक्षाको मात्रै विरोध गरिरहनु भएको छ की अरु पनि ?
हामीले धर्म निरपेक्षको विरोध गर्नुका साथसाथै हाम्रो पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा आवाज उठाइरहेको छ । विभिन्न पार्टीका नेताहरु सत्तामा बसेर देश बनाउने भन्दा पनि कसरी पैसा कमाउने भनेर राजनीतिमा लागेका छन् । यो कसरा सारा जनतालाई थाहा छ । सुन काण्ड, वाइट बडी काण्ड, वालुवाटार प्रकरण यसका प्रत्यक्ष उदाहरण पनि हो । एनसेलले ४० अर्व तिर्नु नपर्ने अवस्था कसरी आयो ? ४० अर्व रुपैयाँ सबै मिलेर भागबण्डा गर्न पाइन्छ ? यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्टी चुप लागेर बस्न सक्दैन । यसको विरुद्ध हामी सडकमा पनि जान्छौ । नेपालको राष्ट्र प्रमुख जस्तो व्यक्ति विवादमा तानिनुभएको छ । उहाँ राष्ट्रप्रति भन्दा पनि दलप्रति झुकाव राखेको पाइन्छ । राष्ट्र प्रमुख कहिले पनि त्यसरी विवादमा तानिनुहुन्न । यो हाम्रो लागि पनि राम्रो होइन । त्यसैले राष्ट्रिय एकताको लागि मेची, महाकाली, हिमाल, पहाड, तराई सबैलाई सुहाउने प्रकारको राजसंस्था हुनुपर्छ । त्यो अहिलेको आवश्यकता बनिसकेको छ ।
खोइ त तपाईहरुले सीमा अतिक्रमणको विरोध गरेको र युवाहरु पलायनको विषयमा बोलेको खासै बोलेको सुनिँदैन त ? किन हो ?
सीमा अतिक्रमणको विषयमा हाम्रो पार्टीले पटकपटक आवाज उठाएको छ । पार्टी अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पटकपटक लेख पनि लेखिससक्नु भएको छ । हामीले पनि सीमा अतिक्रमणको विषयमा बोलिरहेका छौं । हामी जहिले पनि राष्ट्रियता रक्षाका लागि आवाज उठाउँछौं । त्यही भएर देशको सीमा मिचिँदा आवाज नउठाउने भन्ने त कुरै आउँदैन ।
प्रशंग बदालौं, तपाईको पार्टीले त सक्रिय राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएको छ । के नेपालमा राजसंस्था फेरि फर्किएर आउला त ?
पार्टीले सक्रिय राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । हामीले सबैले स्वीकार्य हुने प्रकारको राजसंस्था चाहेका छौं । संसारमा असम्भव भन्ने कुरा त केही छैन नै, त्यसमा पनि नेपालमा राजसंस्था फर्किएर आउँदैन की भन्ने भ्रम छ, त्यो होइन । विश्वका केही विकसित मुलुकलाई हेर्दा पनि राजसंस्था पुनस्र्थापना भएका प्रसस्त उदाहरण छन् । किनकी अहिले गणतन्त्रभन्दा पनि राजसंस्था नै ठीक रहेछ भन्ने जनमानसमा परिसकेको पनि छ । त्यसैले नेपालमा ढिलोचाडो राजसंस्थाको पुनःस्थापना हुन्छ ।
नेपालमा राजतन्त्र फेरि पुनःस्थापना गराउन तपाईहरुको योगदान के रहन्छ ?
पक्कै पनि पार्टीले चाल्ने हरेक निर्णयमा हाम्रो युवक संगठनको साथ र समर्थन रहन्छ । किनकी पार्टीले ल्याउने हरेक निर्णय राष्ट्रको हितमा छ र हुनेछ । यदी राष्ट्रको हितमा गरिएको निर्णयलाई सोही पार्टीको जनवर्गीय संगठनले नमान्ने कुरै हुँदैन । त्यसकारण पार्टीले राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि गर्ने जनसुकै आन्दोलनमा हाम्रो युवा मोर्चा सक्रिय रुपमा अगाडी हुनेछ ।